María Oruña iyo Los Libros del Puerto Escondido | Suugaanta Wararka
John Ortiz | 05/01/2022 02:03 | Qorayaasha, Buugaag, Riwaayad madow
Muuqaalka muuqaalka Suances
María Oruña waa qoraa Isbaanish ah oo ka soo dhalaalay adduunka suugaanta iyada oo ay uga mahadcelinayso sheeko-yaqaankeeda: Buugaagta Puerto Escondido. Shaqadii isku-dhafka ahayd ee bilawday taxanaha 2015 -Deked qarsoon- Waxaa loo turjumay luqado kala duwan waxayna keentay in lagu guulaysto qaybihii xigay. Sheekadiisa dhexdeeda waxa ka dhex muuqda dabeecadda fahmada leh ee Valentina Redondo, oo magaceeda lagu meeleeyey sharaf suugaanta Dolores Redondo.
Oruña waxay u taagan tahay qarsoodiga kaas oo uu ku qeexayo goobaha shaqadiisa, halkaas oo muuqaalada Isbaanishka ay leeyihiin door gaar ah. Saamaynta shaqadiisa sidaas ayay noqotay deegaankaas, in Golaha Deegaanka Suances uu furay 2016-kii Dariiqa Suugaanta Puerto Escondido. Gudaha, waxaad ku dhex safartay meelo kala duwan oo Cantabria ah kuwaas oo taxanaha muhiimka ah ku lahaa.
1 Buugaag ay qortay María Oruña
1.1 Taxanaha Buugaagta Puerto Escondido
1.1.1 Dekedda qarsoon (2015)
1.1.2 Meel la aado (2017)
1.1.3 Meeshii Aan La Guuleysan Karin (2018)
1.1.4 Waa maxay Tideku qarinayaa (2021)
1.2 Buugaag kale oo uu qoray qoraaga
1.2.1 Kaynta afarta dabaylood (2020)
2 Ku saabsan qoraaga, María Oruña
taxane Buugaagta Puerto Escondido
Dekedda qarsoon (2015)
Waxaa la daabacay Sebtembar 2015, waa sheeko dembi oo ay qoraagu ku bilaabay sheeko-yaqaankeeda caanka ah. Sheekadu waxay ku taal Cantabria waxayna qisadu u dhacday laba marxaladood: wakhtigan xaadirka ah iyo sannadihii dagaalkii sokeeye ee Isbaanishka. Sheekada dhexdeeda, Oliver Gordon, Valentina Redondo iyo Gaashaanle Sare Sabadelle ayaa ah jilayaasha wakhtigan; halka waagii hore waayihii hore ee qoyska Fernández laga sheekeeyay
Oliver wuxuu dhaxlay guri gumeysi -Villa Marina oo ku taal badda agteeda gudaha Cantabria. Ka dib dhimashadii hooyadii, wiilka Ingiriisi ah ayaa go'aansaday inuu u beddelo hantida hudheel. Si lama filaan ah, dib-u-qaabaynta waa in la hakiyaa, sida waxay heleen meydka ilmo qarsoon ku xiga sawirka Mesoamerican derbiga guriga.
Daah-furkii foosha xumaa ka dib, dilal kale ayaa ka dhaca agagaarka magaalada, dambiyo, yaab leh, u muuqda inay xiriir la leeyihiin. Isla markiiba, ciidamada ilaalada madaniga ah, oo ay hogaaminayaan Lieutenant Valentina Redondo iyo Gaashaanle Sare Sabadelle, ayaa u dhaqaaqay raadinta gacankudhiiglaha. Dhanka kale, Oliver wuxuu daaha ka qaaday sirta qoyska taasoo u horseedaysa waqti adag dalka: Dagaalkii Sokeeye ee Isbaanishka.
Deked Qarsoon (Dambi...
Meel aado (2017)
Waa qeybtii labaad ee taxanaha. Waa sheeko dembiyeed oo la daabacay Febraayo 2017 oo, sida buuggii ugu horreeyay, waxaa lagu dejiyay Suances. Sheekadu waxay dhacday bilo ka dib dhagartii hore waxayna ka dhex dhacday dil la yaab leh. Mar labaad, waxay xiddigi doontaa Valentina Redondo, Oliver Gordon iyo kooxda booliiska.
Ka dib waqti xasilloon oo magaalada Cantabria, Meydka qof dumar ah ayaa laga helay burburka dhismo duug ah. Meydka ayaa si taxadar leh loo dhigay goobta, wuxuu soo xirtay dhar boqortooyo ah oo dhexe, iyo, waxaa u dheer, shay naadir ah oo gacmihiisa ku jira. Natiijada baaritaanka meydka ayaa ka yaabisay ciidamada booliska iyo shacabka gobolka.
Dhacdadaan ka dib, waxaa deegaanka ka dhacay mowjado dil ah. Kaas oo mar kale daara alaarmiga. Marka la eego muuqaalka cabsida leh, Lieutenant Redondo oo ay weheliso asxaabteeda ka tirsan Ilaalada Madaniga ah ayaa go'aansaday in ay bilaabaan ugaarsiga gacan ku dhiiglaha.. Dhankiisa, Oliver wuxuu caawiyaa saaxiibkii inuu raadiyo walaalkiis maqan, xaalad taas oo ugu dambeyntii keenta natiijooyin la yaab leh.
Meel la aado...
Halka aan ka adkaan jirin (2018)
Sida kuwii ka horeeyey, Halka aan ka adkaan jirin waa xamaasad badan oo ka dhacda xeebta Suances. Waxaa la daabacay 2018 waxaana mar kale jilaya Valentina iyo Oliver. Markan, qisadu kuma xidhna buugaagtii hore oo mawduuca aan caadiga ahayn ayaa lagu daray..
Valentina waxay rajaynaysaa dhamaadka xagaaga si ay fasax ula gasho Oliver. Laakiin wax waliba way rogaan marka la helo wacitaanka kiis cusub: ninkii beerta ka shaqaynayay ee Qasriga Sayidka ayaa u muuqday mid dhintay. Gurigan ayaa ahaa mid aan la degganayn in muddo ah, si kastaba ha ahaatee, qoraaga Carlos Green, oo dhaxlay dhismaha, ayaa dhawaan guuray.
Bilowga, waxaa loo maleeyay in geerida ninku ay sabab u tahay sababo dabiici ah, balse baaritaanku wuxuu muujiyay in qof taabtay meydka. Aragtida ayaa qabsata markii Valentina ay waraysato Green oo uu qirto in uu habeenkii dhibay hay'ado dahsoon.
Inkasta oo taliye-ku-xigeenku uu ka shakisan yahay fal-dambiyeedka, iyada, Oliver, iyo kooxdeeda waxa lagu qabsaday dhacdooyin aan la macnayn karin.. Tani waxay ku dhiirigelinaysaa inay wajahaan baaritaanka iyada oo la raacayo jaangooyooyin kale, taas oo soo saarta daahfurka cajiibka ah ee ku saabsan qasriga iyo dadka ku dhex milmay dhacdooyinka.
Halkaynu ahayn kuwo laga adkaan waayey...
Maxaa hirarku qariyaa (2021)
Waa sheeko-abuurkii ugu dambeeyay ee qoraagu iyo qaybtii u dambaysay ee tixda Buugaagta ee Deked qarsoon. Waa riwaayad madax-bannaan oo Lieutenant Valentina Redondo iyo asxaabteeda ka tirsan ciidanka baadhista bilaysku ay sii ahaanayaan jilayaasha. Bishii Noofambar 2021, gudaha Isbaanishka, shaqadu waxay heshay kala soocida buugaagta khayaaliga ah ee ugu wanaagsan sanadka oo ay bixiyaan buug- iibiyayaasha "El Corte Inglés".
Valentina waxay haysataa waqti adag. Waxaa barbar socday dhacdo aad u xun oo ka dhacday magaalada. Judith Pombo -Madaxweynihii xiriirka tennis-ka Santander- ayaa u muuqday mid dhintay. Meydkiisa ayaa laga helay qol ay ku jirtay doon shiraac ah wax yar uun ka dib markii uu kulan la qaatay koox la soo xulay oo marti ah.
Baaritaanku wuxuu caqabad ku noqon doonaa Lt. Redondo iyo kooxdeeda, kuwaas oo mar kale la kulma dambiyo aan la rumaysan karin. Gabadha muhiimka ah ayaa laga helay qol gudaha ka qufulan oo dhaawac naadir ah uu soo gaaray, taasoo xaqiiqada ka buuxinaysa sirta. Goobtu waxay u egtahay wax ka mid ah buugaagta dambiyada ee Agatha Christie ama Edgar Allan Poe.
Muxuu baddu qariyaa:...
Buugaag kale oo uu qoray qoraaga
Kaymaha afarta dabaylood (2020)
Waa buuggii afraad eehttps://www.actualidadliteratura.com/entrevista-con-maria-oruna-la-autora-de-el-bosque-de-los-cuatro-vientos/ Oruña, ayaa la daabacay Ogosto 2020 ilaa hadda waa shaqo shaqsiyeed. Waa sheeko dahsoon oo lagu dejiyay Santo Estevo, ee Galicia. Sheekadu waxay ku soo baxdaa laba waqti oo kala ah: - Qarnigii XNUMX-aad - iyo hadda, oo ay isku xidhan yihiin xidhiidhka jilayaasha.
In 1830, Dr. Vallejo wuxuu raacay gabadhiisa Marina oo u socda Monastery ee Santo Estevo, oo ku taal Ribas del Sil ee Ribeira Sacra. Marka meesha la joogo, ninku wuxuu isu dhigay dhakhtar ee shirka iyo magaalada. Dhankeeda, gabadhan yar ayaa u kala qaybin doonta rabitaankeeda ah inay barato cilmiga caafimaadka iyo diidmada bulshada ee caadooyinka waagaas. Tani waa sida ay ula kulmi doonaan dhacdooyin khuseeya oo calaamadayn doona mustaqbalka.
Ku dhawaad ​​​​laba boqol oo sano ka dib, anthropologist Jon Bécquer ayaa yimid Monastery hore, oo uu ku dhiirri-galiyay farsamadiisii ​​uu ku baadi-goobayay farshaxannada luntay. Meeshaas ayuu ku bartay khuraafaad qadiimi ah, waxaa ka buuxsamay xiiso wuxuuna go'aansaday inuu baadho. Laakin Wax aan la filayn ayaa dhacay: nin dhallinyaro ah oo xidhan dharka Benedictine ayaa meydkiisa la helay beerta meesha quduuska ah.
Bécquer wuxuu ku lug leeyahay baaritaanka xaqiiqda, iyo Wax kastaa waxay tilmaamayaan xaqiiqda ah in wixii dhacay ay ku xidhan yihiin wakhti hore oo sir ah. Laga soo bilaabo halkaas, mid si joogto ah u guurto inta u dhaxaysa laba xilli, "halyeeyga sagaalka siddo" ayaa jooga oo helaya kaalin weyn.
Ku saabsan qoraaga, María Oruña
María Oruña waa qareen iyo qoraa Galician ah oo ku dhalatay Vigo 1976. Toban sano waxay ku shaqeysay sharciga shaqada iyo goobaha ganacsiga. Waayo aragnimadaas awgeed, wuxuu daabacay buugiisii ​​ugu horreeyay: Gacan -qaadaha (2013). Sheekadani waxay ku saabsan tahay dhibaataynta xirfadleyda iyo gar-qaadista. 2015 waxa uu soo bandhigay qisadan Deked qarsoon, oo ay ku bilaabatay sheekadii caanka ahayd Buugaagta Puerto Escondido.
Ilaa hadda, Taxanuhu wuxuu leeyahay saddex sheeko oo dheeraad ah: Meel aado (2017) Halka aan ka adkaan jirin (2018) iyo Maxaa hirarku qariyaa (2021). Sidoo kale, ururintiisa waxaa kaaba shaqo gaar ah: Kaymaha afarta dabaylood (2020).
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Buugaag ay qortay María Oruña
Buugaag ku saabsan Magi. Sheekooyin iyo sheekooyin xul ah